AbeSuperSport abanankinga nokuthothelana kwemidlalo ngoba "banabadlali abanele" - Impempe
AbeSuperSport abanankinga nokuthothelana kwemidlalo ngoba “banabadlali abanele”
January 24, 2021 Impempe.com
“Asikho isidingo sokucasha ngesithupha sikhale ngokuthothana kwemidlalo ngoba yithina futhi ebesikhala sivaleleke emakhaya ngesikhathi sokuvalwa kwezwe okokuqala.”
Lawa ngamazwi kakaputeni weSuperSport United uRonwen Williams awasho ngesikhathi enaba ngamalungiselelo omdlalo wabo neTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) kwiDStv Premiership ngo-3.30 ntambama eTohoyandou Stadium.
Umhlaba wonke, abadlali nabaqeqeshi bakhala esifanayo ngokusondelana kwemidlalo kwazise kumpintshwa izinto ngenxa ye-Covid-19, eyenza isizini edlule imiswe maphakathi yaze yabuye yaqedelwa sekukudala.
Akufani kodwa kwiSuperSport ngokusho kukakaputeni wabo oveze ukuthi basibona njengesibusiso lesi sikhathi esivula ithuba lokuthi wonke umdlali okhona emabhukwini eqembu afake isandla.
“Kule sizini asikashaywa ngakho lokho kumnandi. Sifuna ukuqhubeka kanjalo. Iphupho lethu ukudlala njalo. Ithothene impela imidlalo futhi sekuyezwela emilenzeni yabadlali, kodwa lokhu kuvula ithuba kubadlali abangalitholi njalo ijezi.p
“Umqeqeshi wethu uhlale ekushumayela lokhu ukuthi kwiSuperSport ngeke sikhaliswe ukuthi imidlalo miningi ngoba sinabadlali abanele futhi abaseqophelweni elifanele. Okumqoka nje, ukuthi laba abangalijwayele ijezi bahlale bemi ngamanzonzwane,” usho kanje uWilliams.
Ukhalile ngokulahla kwabo amaphuzu emidlalweni emibili edlule kodwa ikowaMaZulu lapho ekhale khona wagxila.
“Okungiphathe kabi ukuthi Usuthu lufike kithina lwasithwalisa kanzima nathi savuma. Yebo sizamile esiwombeni sesibili kodwa angizange ngiyithande indlela esidlale ngayo kulo mdlalo.”
Yize iTTM inezinkinga kodwa ngeke bakunake kakhulu lokhu ngokusho kukaWilliams.
“Akuwona umdlalo olula kithina lo. Sidlale nabo umdlalo wokuqala wesizini sazizwela ngakho siyayiqonda kahle into esibhekene nayo. Isimo abakusona singabenza balwe ngakho konke abanakho, ngakho kubalulekile ukuthi siye kulo mdlalo siwavule wonke amehlo,” kusonga yena.
Previous Previous post: UKonqobe uwusizo olukhulu kwiChippa, kusho uMalesela
Next Next post: I-The Citizens iqede nya ngerekhodi laBafana Bes’thende